जाजरकोटको बह – भोटमरीमा आउनेहरु भोकमरीमा खै ? – Bignewskhabar.com
जाजरकोटको बह – भोटमरीमा आउनेहरु भोकमरीमा खै ?
मजदुरहरुलाई भोटमरीको चुनावी माहोलमा लौनहजुर भन्नेहरु । अहिले कोरोना छ ,सरकारलाई पनी धौधौ परेको छ, भन्दै पन्छीएका छन । रोगभन्दा भोकको डर पैदा भएको छ ।
लोकेन्द्र विश्वकर्मा । १ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:०७ मा प्रकाशित
खलंगा, ३१ भदौ । जाजरकोटमा बिश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नामक कोभिड–१९ रोगभन्दा,दलित तथा बिपन्न समुदायहरुलाई बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोड्ने भोकको डर पैदा भएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश दलित तथा बिपन्न समुदायहरुको यतिबेला दिन बिराई चुलो बल्न थालेको छ । दिनभर अरुको मजदुर गर्ने यी बिपन्न्न समुदायहरु भोकको चपेटामा परेका छन ।
भोकमहारीले मजदुरहरुको दिनचर्या ?
गत महिनाको भीषण बाढी पहिरोले जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा १२ सय भन्दा माथीका घरपरिवारहरु स्थानिय बिद्यालय ,जङगलहरुमा टहरा बनाई बिस्थापित भए । बिस्थापित परिवारहरु हाल खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आएका छन ।
तल्कालिन केहि संघ–संस्थाहरुले खाद्यान्नको बन्दो गरिदिए । त्यो खाद्यान्न रितिएपछी उनीहरुको दिन बिराई चुलो बल्न थालेको छ ।
यता कोरोनाको कहर नभएको भएपनी कसैको श्रम गरेर परिवार पाल्ने बारेकोट ४ सार्कीटोलकी बिस्थापित हरिकला सार्कीले बताईन । अहिले बारेकोटका बिस्थापितहरुलाई कोरोनाको कहर भन्दा भोकको कहर पैदा भएको छ ।
हरिकलाको मात्र यो समस्या होईन । भगवती आधारभुत बिद्यालयकोे चौरमा टहरा बनाई बस्दै आएका ३३ घरपरिवारहरुको यो समस्या रहेको छ । यता बारेकोटका अधिकांश बाढी पीडितहरुलाई हातमुख जोड्नापनी धौधौ भएको छ ।
यस्तै बाढी पहिरोले घरबार बिहिन बनायो । खानाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको शिवालय गाउँपालिकाका प्रेमबहादुर नेपालीले बताए ।
कसैको मजदुर गरीखाने शिवालयका बिपन्न समुदायहरुलाई अहिले रोगभन्दा भोकको डर पैदा भएको छ ।
सदैभर गरिवीको रेखामा परेका जाजरकोटका दलित तथा बिपन्न समुदायहरुलाई अहिले रोग भन्दापनी भोकको छाकटार्नमा कठिन भएको छ ।
अर्का पक्ष कोरोनाको कहरले बृद्धी गरेको लकडाउनले अरुको श्रम गरेर आफनो जिवीका गुजार गर्ने बिपन्न समुदायहरुलाई निकै ठुलो असर पुर्याएको छ ।
भोटमरीमा आउनेहरु भोकमरीमा खै ?
श्रम गरेर दिनचर्या चलाउने जिल्लाका दलित तथा बिपन्न समुदायहरुलाई परिवार पाल्नामा धौधौ भएको बेलामा एक मुठीको जोहो गरौ भनेर केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानिय सरकारहरुका प्रतिनिधिहरुको पहल भने सुस्त बन्दै गएको छ ।
दिनौ दिन भोकमरीको अबस्था झेल्दै आएका यी बस्तीहरुमा चुनावी माहोलमा थुप्रै ब्यक्तीहरु आउँने गरिएका थिए । बिडम्बना बाढी पहिरो लकडाउनले गर्दा जिल्लाका अधिकांश स्थानमा भोकमरी पैदा भयो ।
उल्टो भोटमरीमा घरघरमा आउँने लौन हजुर भन्नेहरु । भोकमरीको संकट पर्दा कुराका भारी समेत बिसाउना नआएको स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ ।
सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेकाले भाषणका सहयोगी हातहरु हल्लीएपनी , भोकको चपेटामा परेका समुदायहरुका लागी हात भन्दा औला समेत हल्लीना नसकेको जिल्लाका स्थायिनहरुको भनाई रहेको छ ।
एकठाउँमा हातहरु हल्लीए – हुदा खानेहरुलाई भन्दापनी हुनेखानेहरुकालाई भएको बाढी पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
संकटको दिनचर्या ?
अहिले जिल्लाका सातै स्थानियतहका ग्रामिण भेगहरुमा भोकमरी पर्न थालेको छ । यसका ब्यबस्थापन गर्नमा केन्द्रीय प्रदेश स्थानिय सरकारहरुले लापर्वाही गरेको पाईन्छ । केही ब्यबस्थापन गरेपनी राहतमा अनियमिता देखिएको छ । राहत हुदा खानेहरु भन्दापनी हुने खानेहरुलाई भएको स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ ।
एक प्रश्न ? भोकमरीलाई नियन्त्रण गर्छु !
अधिकांश स्थानमा भोकमरीको चपेटामा परेका दलित तथा बिपन्न समुदायहरुलाई गाँस,बाँस,कपास जोहो गरिदिएमा उनीहरुको दिनचर्या संकटमा रहने छैन ।
यता जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिका शिवालय गाउँपालिका बारेकोट गाउँपालिका र अन्य स्थानियतहमा खाद्यान्न अभाव हुदा, ब्यबस्थापनमा लागी खटिरहेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य गनेश प्रसाद सिंहले बताए ।
उनले भने – जाजरकोटको भोकमरीलाई अन्तय गर्न सबै निकायहरुबाट पहल चालेका छौ । केही दिन यता बिश्व खाद्य कार्यक्रम,पाँचतारा युवा संरक्षक मन्च, लगायतका संघ–संस्थाहरुको समन्वयमा बारेकोटका बिस्थापितहरुलाई खाद्यान्नको केही राहत बितरण गरिएको छ । चरम भोकमरीको संकट पैदाहुदा हामी बेखबर नबस्ने प्रदेश सभा सदस्य सिंहको बनाई रहेको छ ।
यस्तै केन्द्रीय सरकारबाट पनी जाजरकोटको भोकमरीलाई नियन्त्रण गर्न उच्च कदम चालेको प्रतिनिधीसभा सदस्य तथा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले बताए ।
दिनभर मजदुर गर्ने बेलुकी चुलो नबल्ने डर भएका समुदायकालाई भोकमरीको चपेटामा पर्न नदिने मन्त्री बस्नेतको भनाई रहेको छ ।
मन्त्री बस्नेत अनुसार जिल्लामा खाद्यान्नको लागी डियो बिक्री केन्द्र थप्दै गएका छन । अन्य डिपो बिक्रीकेन्द्र नभएका पालिकाहरुमा पनी थप्ने प्रयास गर्ने भएका छौ ।
बिडम्बना थपिएका खाद्य डिपो बिक्रीकेन्द्रहरु रित्तो अबस्थामा रहेको स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ । यस्तै – बाढी जिलामा बाढी पहिरोले खानेपनी,बाटोघाटो,सडकखण्ड,सबै अबरुद्ध भएको छ । अर्कापक्ष कोरोना कहर भन्दा भोकको कहरमा पर्ने सम्भावना निकै रहेको छ ।